Izifo ukuvuvukala ka izitho zangasese anesikhundla ehamba phambili phakathi ezinkulu izimbangela ukungabi nenzalo kwabesifazane. Basuke ephelezelwa uncharacteristic osenyameni lwesitho sangasese sowesifazane kanye nokuhlukumezeka esiswini ephansi. Eminingi yobulili fair indiva lezi zimpawu, ngokubhala it off ukuze ukucindezeleka noma hypothermia. Phakathi kwazo zonke pathologies esifazane uhlelo zokuzala ngokuthi 'ukudunyiswa' indawo yisishiso wesibeletho. Yisifo ezivamile iyaphendula kahle ekwelashweni. Nokho, ulise izincomo udokotela ladies eziningi iphela nenzalo. Eyingozi kakhulu isifo?
i-canal wesibeletho uxhuma sangasese ukuze kwesibeletho. It has ukuma Isigaxa noma isilinda, ubude bawo ingeqi 4 cm wesibeletho isiteshi wesibeletho wenza imisebenzi emibili. Vikela ezifweni futhi ikhuthaza isidoda phakathi nge-ovulation. Ngaphansi kwethonya izici ezihlukahlukene yangaphandle kanye / noma yangaphakathi, yilapho kungase mucosa avuvukele. Lesi sifo okuthiwa endotservitsitah. Kuyinto engenabungozi empilweni yabesifazane ne ekuhlonzweni nasekwelashweni efanele. Kungenjalo inqubo sokugembula kungaholela eziyingozi.
Izizathu eziyinhloko endocervicitis
Ukuvuvukala wesibeletho kungenzeka etiology kokubili ezithathelwanayo futhi okungezona ezithathelwanayo. Esimweni sokuqala, lo amagciwane ahlukahlukene (isikhunta Candida, streptococcus, chlamydia, gonococcus, papillomas, njll) isebenze njengomxhumanisi isifo ingqondo izici. Ngokuvamile zingena umzimba ngokuhlangana ngokocansi. Nokho, igciwane kungenzeka ngokusebenzisa ipheshana wokugaya ukudla noma uhlelo lymph. ukuvuvukala Non-ezithathelwanayo wesibeletho, ezimweni eziningi ngenxa umthelela zangaphandle noma azalwa naso ukukhubazeka yokwakheka. Lokhu izimbangela iqembu zihlanganisa ukuhlukumezeka, ukuchayeka emisebeni eyingozi, isimila kumiswa.
Kufanele futhi sicabangele izici ukuthi ngokungaqondile nomthelela ekuthuthukiseni ukuvuvukala:
nokuncipha amasosha omzimba wendawo;
lesizalo izicubu umonakalo ngenxa yokukhishwa kwezisu, lemiklamo ukufakwa.
Ngokuvamile, i-plug isikhwehlela njalo elise mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi we-canal wesibeletho. Kuvikela kwesibeletho kusuka Amagciwane. Ngenxa izinqubo ezihlukahlukene zokwelapha zikhubazekile tube, ukushintsha yawo yamakhemikhali kwengoma. Ngenxa yalokho, uma unesifo lingena kalula phakathi komgodi lesizalo, okubangela ukuvuvukala. Izitshalo pathogenic ingase futhi ufake umsele wesibeletho ngegazi kokuya esikhathini. Ngakho-ke, ngalesi sikhathi kubalulekile ukuba uhlole ukunakekela okukhethekile inhlanzeko of umthondo.
Izimpawu kanye izimpawu zesifo
Ukuvuvukala umsele wesibeletho libhekene isithombe esithile emtholampilo. Okokuqala, endaweni zangasese i ukulunywa kabi esivuthayo. Izimpawu ke kwahambisana ukungakhululeki lapho esiswini, futhi ezinkulu. Ukungabi ukwelashwa okufika ngesikhathi amafomu okukhulu isifo yingozi ukuguqulwa yayo ku ezingamahlalakhona. Kulokhu, izimpawu ezichazwa zinyamalale. Nokho, lokhu akusho ukuthi owesifazane walulama ngaphandle usizo lwezokwelapha. Ngakho-ke, umzimba bazivumelanisa ukutheleleka, futhi lesi sifo isidlulile ifomu esicashile. Uma ngalesi sigaba ekwelashweni ukunganakwa, yisishiso ungasakazekela izitho eduze. Yiqiniso engapheli eyayiqhutshwa lesi sifo kuholela izinguquko izicubu isiteshi umama. Ngenxa yalokho, odokotela sebethole ukuguguleka noma dysplasia. Ukuvuvukala siyashintsha ukwakheka qualitative akhiqizwa isikhwehlela wesibeletho, okuyinto kusondele nenzalo.
Izimpawu ukuvuvukala ukunikeza izizathu azokuqhubela luhlolo zokuxilonga, okuvumela ukuba ukwehlukanisa zokugula ezinye izifo. Iluphi uvivinyo okudingeka badlule ngakhona?
zokutshala Amagcikwane kusuka komsele wesibeletho ukucacisa ejenti causative izifo.
Colposcopy kusivumela ukulinganisa indawo ethintekayo.
luhlolo Cytological kusiza sithole isimo amaseli EPITHELIAL.
smear ezincane liyadingeka ukuze kutholwe kwamagciwane, ukuhlolwa ukuvuvukala (ama-leukocyte ukuqinisekisa ubukhona yayo umsele wesibeletho).
Kuphela ngemuva luhlolo egcwele isiguli udokotela singakwazi ukubona agent causative of ukuxilongwa esichazayo, khetha ukwelashwa.
Isikimu uswidi ukuvuvukala kuncike degree yayo kobukhulu kanye nohlobo lwegciwane. Ngakho-ke, esinye isinyathelo zokuxilonga yokunika zokutshala webhaktheriya kusuka komsele wesibeletho. ukwelashwa ukuzixazulula izinkinga eziningana ngesikhathi esisodwa: ukuqedwa Amagciwane, izimpawu isifo, zokuvimbela kokushelela. Ngokuvamile, ukuqeda lezi zinkinga, odokotela linqume generic elwa namagciwane izidakamizwa "Polizhinaks".
Ngaphezu kwalokho, prescribers ukubuyisela ukuzivikela mzimba. Uma imbangela isifo igciwane fungal, imithi elwa namagciwane esetshenziselwa ukwelapha iqembu tetracycline ( "Doxycycline", "monomitsin"), futhi macrolides ( "erythromycin"). Ekukhombeni Trichomonas ezifanele ukusetshenziswa ejenti antiprotozoal. Ukubuyiselwa microflora lwesitho sangasese sowesifazane kuhilela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngesisekelo acidosis acid amagciwane. Izidakamizwa yokwelapha kanye Isikali ukukhethela udokotela kucatshangelwa isimo sempilo isiguli. ukusetshenziswa Independent kwemithi is hhayi Kunconywa. Isikhathi yokwelapha kuncike ukungayinaki inqubo sokugembula.
Ngokuvamile ukuqinisekisa ukuvuvukala e umsele wesibeletho, isiguli ukuthatha swab lwesitho sangasese sowesifazane, bese uthumela ku Histology. Ngezinye izikhathi imbangela isifo ingabonakali. Ezimweni ezinjalo ukusebenzisa inqubo curettage, lapho indoda ekhethekile ithuluzi yesikimu endometrium izifundo okwalandela. Ngokuhamba kwesikhathi eseluleme, ngakho konke manipulations ziphephile kwezempilo lesiguli. Ngokuvamile, curettage endocervical ezinqunyiwe ezimweni okusolakala imvelo abulalayo lesi sifo.
Izindlela zokuvimbela ukuvuvukala
Ukuvimbela ukuthuthukiswa isifo, kufanele khona kabili ngonyaka luhlolo ngumuntu wezifo zabesifazane. Uma uhlangabezana nanoma yiziphi lezi zimpawu kufanele afune usizo lwezokwelapha. Ukuhlolwa esitulweni izifo zabesifazane kanye nenombolo ye cwaningo ukuvumela ukuqinisekisa yisishiso wesibeletho. Ukwelashwa iqondiswa emva luhlolo zokuxilonga. Kuphela ngesisekelo izikhalazo isiguli udokotela ayikwazanga ukuqinisekisa ukuxilongwa futhi akunikeze imithi. Gwema lesi sifo kungaba, uma ulandela imithetho ulula:
ngesikhathi sexual usebenzisa amakhondomu;
ukuba bangakushayi indiva komuntu;
ibhekane ukuhlolwa njalo udokotela;
abe umuntu aya naye ocansini njalo.
Ukuhambisana lezi ziqondiso kusiza ukuze uhlale uphilile.
Yini wenziwa amaqanda laparoscopy?
Yini amakhandlela wesibeletho ukuguguleka usizo? Izibuyekezo
Mars umugqa phezu esandleni ayekuyo, okusho izithombe. Sokuqonda imigca entendeni
Isifo sikaMénière: siyini nokuthi silwe kanjani nalesi sifo
"Winter King", ikhukhamba isaladi ebusika: Recipe
Moonshine "Antonovich": izithombe, incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa